20-ka laacib ee diyaarka u ah kooxda Real Madrid kulanka El Clasico oo la shaaciyey & Gareth Bale oo ka soo muuqday – Gool FM
(Madrid) 22 Abriil 2017 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa shaaciyey 20-ka laacib ee diyaarka ah kooxdiisa kulanka adag ee El Clasico oo ay wajahayaan Barcelona.
Gareth Bale ayaa dib ugu soo laabtay shaxda rasmiga Real Madrid ee diyaarka u ah kulanka Axadda ay garoonkooda Santiago Bernabeu kula ciyaarayaan Barcelona ee El Clasico, sida uu xaqiijiyey macallin Zinedine Zidane.
Bale oo seegay kulankii kooxdiisa Real Madrid ay waqtiga dheeriga ah kaga badisay Bayern Munich ee siddeed dhammaadka Champions League ayaa la maqnaa dhaawac kubka ah oo soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Allianz Arena.
Laakiin 27-sano jirkaan weerarka uga dheela xulka Wales ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda shalay oo Jimce ahayd, tababare Zidane ayaana shirkiisa jaraa’id maanta oo Sabti ah ku sheegay inuu qeyb ka yahay xiddigaha Madrid ee diyaarka u ah inay wajahaan kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona.
“Bale berri waa uu nala jiri doonaa inaga, kaddib waxaad arki doontaan inuu ku soo bilowdo safka hore iyo inkale” ayuu suxufiyiinta maanta u sheegay Zidane.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 20-ka ciyaaryahan ee Real Madrid kuwaasoo diyaar u ah inay wajahaan Barcelona:-
KARTUUNKA MAANTA: Macallin Jose Mourinho oo ka wal-walsan maqnaasha Ibrahimovic